Tag: chirongwa chekushambadzira | Martech Zone
Tag: chirongwa chekushambadzira
NeChishanu, Kurume 5, 2021 NeChishanu, Kurume 5, 2021 Peo Persson
Dhijitari Tekinoroji Iri Kukanganisa Sei Nzvimbo Yekusika
Chitatu, November 28, 2018 Chitatu, November 28, 2018 Douglas Karr
Imwe yema Themes akaenderera mberi andinonzwa nezve kufambira mberi muhunyanzvi ndeyekuti ichaisa mabasa panjodzi. Kunyangwe zvingave ichokwadi mukati meimwe maindasitiri, ini ndinopokana zvakanyanya kuti ichave ine simba mukati mekushambadzira. Vatengesi vanokurirwa izvozvi sezvo huwandu hwemasvikiro uye chiteshi zvinoramba zvichiwedzera apo kushambadzira zviwanikwa zvinoramba zvakamira. Tekinoroji inopa mukana wekuti iite zvekudzokorora kana echinyorwa mabasa, ichipa vashambadziri vane yakawanda nguva yeku
Svondo, Ndira 15, 2017 Svondo, Ndira 15, 2017 Douglas Karr
Kunyange paine mashambadziro akati wandei ekushambadzira uko vashambadziri vanogona kutenga mishandirapamwe uye nekugadzirisa kwavo mushandirapamwe, mapuratifomu-ekuda-mapuratifomu (DSPs) - dzimwe nguva anonzi mapuratifomu ekutenga - akaomesesa uye anopa akawandisa maturusi ekushandisa, isa chaiyo-nguva mabhaidhi, track, retarget, uye nekuwedzera kugadzirisa kwavo kushambadzira. Zvidimbu-zvemapuratifomu zvinogonesa vashambadziri kuti vasvike mabhiriyoni ezviitiko mune yekushambadzira hesera iyo isingakwanise kuwanikwa pamapuratifomu sekutsvaga kana zvemagariro.
Chipiri, Mbudzi 15, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Isu takaona vaparidzi vepamhepo vachinetseka gore rino. Zvizhinji zvekuwedzera kwavo zvemukati zvakaburitswa, vakawedzera yavo misoro kufukidzwa, vakatenga vateereri kuti vawedzere yavo yekuona manhamba, uye vakavhura yavo saiti kune chero kana ese kushambadzira. Ini pachangu, ndinotenda iko kukanganisa. Isu takadzivisa kutenga vateereri, tikachengeta misoro yedu yakasimba, uye isu takaramba kushambadzira kakawanda kubva kune-kwenyaya kushambadzira. Nekutenda, kushambadzira network dziri kupindura. Inofungidzirwa kuti $ 160 bhiriyoni ichashandiswa pasi rose kushambadziro yedhijitari gore rino, sekureva
Skimlinks Dhata Inopa Yekutarisa - Kubvunza Mibvunzo Yakakodzera
Chipiri, Kurume 15, 2016 Alicia Navarro
Kusvika nguva pfupi yadarika, vashambadzi veadhijitari uye vashambadzi vevashambadziri vanga vachitsvaga kugadzira programmatic kushambadzira inotenga yakatarisana nedema dhata data mamiriro. Vazhinji havasi mainjiniya kana masayendisiti e data, uye ivo vaifanira kutora kusvetuka kwekutenda uye kuvimba nezvavanotaura zvemupi wedata nezvehunhu hwe data, vachiongorora mhedzisiro mushure mekuitwa - uye mushure mekunge kutenga kwatoitwa. Asi chii chinofanira kushambadzirwa nevashambadzi mumumiriri wedata? Vanogona sei kuona kuti ndeipi